Nagu saabsan | Hebei Yangan Imp. Iyo Exp. Co., Ltd.
Farshaxanka iyo NOLOLKA OO SI WALBA ISKU DARSAN WAQTIGA OO DHAN
waayo-aragnimo wax soo saar
mashaariicda si dhammaystiran loo fuliyo
100% taageerooyin farsamo
iyo adeega ka dambeeya markasta
Shaqooyinka Atisan waxay ku dadaalaan qodista farshaxanka farshaxanka, ballaarinta farshaxanka farshaxanka iyo diiradda taariikhda fanka muddo ka badan 42 sano.
Warshadeenu waxay ku qalabeysan tahay aqoon isweydaarsiyo casri ah waxayna abuurtay nashqado qaab dhoobo ah. Warshadeenu waxay badanaa maamushaa farshaxanno kala duwan, sida ilo, gazebos, dabka, taalooyinka, tiirarka, goobaha ubaxa, waxyaabaha la yareeyo, astaamaha dhismaha, alaabada birta ah ee qadiimiga ah, farshaxanno aan la taaban karin oo loogu talagalay qurxinta jardiinada, qurxinta gudaha iyo dibadda iyo naqshadaha, gaar ahaan dhismaha, iwm.
Waxaan leenahay naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah iyo farshaxanno, waxaan u habeyn karnaa wixii farshaxanno ah oo ku saleysan naqshadahaaga ama shuruudahaaga. Waxaan ku fiicanahay farsamada gacanta, farshaxanada reer galbeedka iyo alaabada leh fikradaha reer galbeedka.
Shirkaddayadu waxay isku daraysaa ruuxa farsamada yaqaan farsamada casriga ah ee xardha, iyagoo ogaanaya isku darka saxda ah ee farshaxanka farshaxanka soosaarka iyo wax soosaarka baaxadda weyn. Farshaxanka Jaamacada Caadiga ah ee Hebei iyo Machadka Waqooyiga Shiinaha ee Awoodda Korantada, oo noqotay "saldhiga barashada waxbaridda" ee Akadeemiyadda. Sannadkii 2013, iyada oo uu hagayo Professor Lin Hong, oo ah aqoonyahan ka tirsan The Petrov Academy of Arts and Science of Russia, Waxaan xoojiyay cilmi baaristeyda iyo horumarinteyda iyo awooda nashqadeynta, iyo shaqooyin taxane ah oo badan oo aan qorsheeyey ayaa ku guuleystey abaalmarino xirfadeed iyo amaan dhanka warshadaha ah.
U hogaansanaanta fikradda ah Naxaasta Nuuradu waa Nolol Cajiib ah, waxaan qadarineynaa mid kasta oo ka mid ah farshaxankeenna waxaanan rajeyneynaa in mid waliba ka heli karo farxad iyo qurux iyaga ka timid.
Ku tiirsanaanta fikradeena naqshadeeyaha gaarka ah, habkayaga dhaqameed ee soo jireenka ah, iyo habka loo dajiyo cusbooneysiinta, waxaa laga yaabaa inaad hesho farshaxan qurux badan oo gaar ah.
Jihaynteena: farshaxanka iyo noloshu si isku mid ah ayey iskugu jiraan markasta. Haysashada farshaxan dhaqameed qurux badan iyo naqshad casri ah si adduunka loogu soo bandhigo farshaxanno farshaxan ah oo leh ruux farshaxan. Qaab dhismeedka farshaxanka ayaa xardhan farshaxan qurxin ah, farshaxan degmada loogu talo galay beerta & qurxinta jardiinada iyo horumarinta dhaqanka iyo hal abuurka ganacsiga.
Ujeedadayada: Macaamiisha waxay wajahayaan warshad. Macaamiisha ayaa lahaan kara farshaxanka iyo farshaxanada ugu qanacsan qiimaha ugu fiican. Macaamiilku si toos ah iyo gebi ahaanba fikrad buuran ugu beddeli karaa warshad. Jidkan, farshaxan kasta oo kama dambeys ah noloshu kama dhigi karto mid qurux badan, laakiin sidoo kale waxaa lagu qaddariyaa markhaati taariikhi ah.